IMeadow Lake Roadhouse - I-Airbnb
IMeadow Lake Roadhouse
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDwight
IMeadow Lake Roadhouse yindawo enembali, ehonjiswe ngokupheleleyo, eyi-1,500 square foot, i-log Roadhouse.
I-Roadhouse yakhiwa ngeminyaka yoo-1860. Ekuqaleni kweminyaka yoo-2000, le ndlu yadityaniswa yaza yaphinda yakhiwa ngokutsha yaza yalungiswa ngeendlela ezimbini eziphantsi zeengcambu zatshintshwa ngethemba lokuba le ndlu inembali iza kusinda kwiminyaka eyi-150.
I-Roadhouse ineveranda enkulu egqunyiweyo yokungena, kunye neendawo ezijonge i-Range Range. Umgangatho oyintloko we-860 square foot unekamelo elikhulu lokuhlala, ikhitshi negumbi lokuhlambela. Kwigumbi lokuhlala kukho isitovu seenkuni, i-tv enomatshini wokudlala ii-vhs kunye neefilimu ezikhethiweyo kunye nelayibrari yendlu. Igumbi lokuhlamba elinemigangatho emine yendlu line-shower nebhafu endala enemilenze.
Ikhitshi le-Roadhouse linezitya kunye nezinto zokupheka. Inefriji evulekileyo, indawo yokugcina izinto kunye nendawo yokulungiselela. Ixhotyiswe ngesitovu seenkuni zakudala kunye neoveni kunye nesitovu sale mihla kunye nesitovu kunye neoveni. Ekhitshini kukho iveranda enkulu enetafile nezitulo zokutya phandle.
Amagumbi okulala amabini akumgangatho wesibini. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu. Kwigumbi lokulala lesibini kukho ibhedi elala abantu ababini neebhedi ezimbini ezilala abantu ababini.
Ukongezelela kwisitovu seenkuni, le ndlu ifudunyezwa ziiradiyetha zombane.